ANALANJIROFO : Serasera sy kolontsaina matanjaka ny fanambin’ny talem-paritra vaovao
Ny filankevitry ny minisitra natao ny alakamisy 6 jona lasa teo no nanendry an’i Ndiamahazo Imbinizafinirigny Mickaelys fantatry ny maro amin’ny anarana hoe Kamy teo amin’ny toeran’ny Talem-paritry ny serasera sy ny kolontsaina Analanjirofo araka ny tolo-kevitry ny minisitry ny serasera sy kolontsaina, Lalatiana Rakotondrazafy. 13 juin 2019
Tontosa ny antoandron’ny talata 11 jona teo ny famindram-pitantanana teo amin’ny tale vaovao sy ireo tale teo aloha. Famindram-pahefana miisa roa no natao. Nisaraka mantsy ny minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina tamin’ny fitondrana teo aloha. Nitambatra kosa izany tamin’ izao fitondrana tarihin’ny Filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina izao.
Ho an’ny departemanta serasera, vita soa aman-tsara ny famindram-pahefana teo amin’ny tale vaovao sy ny tale teo aloha, Kami Chan. Nitohy tamin’ny fanaovana famindram-pitantanana teo amin’ny talen’ny kolontsaina Analanjirofo teo aloha Herman Levao izany.
Nandritra ny fandraisam-pitenenana nataony, dia nankasitraka ny fitondram-panjakana ny talen’ny serasera sy ny kolontsaina vaovao ao amin’ny Faritra Analanjirofo tamin’ny fametrahana fitokisana taminy. Nampifanarahany amin’ny politikan’ny minisitera ireo vina entiny ao Analanjirofo. Anisany ny fanetsehana ny serasera mivoy olom-pirenena vanona. Tafiditra ao anatin’izany ny hetsika Tagnamaro andron’ny olom-pirenena izay ezahina hisy tsy tapaka. Handray anjara mavitrika amin’ny fanavaozana ilay lalàn’ny fifandraisana ny mpanao gazety ao Analanjirofo. Hisy ihany koa ny fanaraha-maso ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety sy ireo haino aman-jery mba hanara-dalàna.
Nanambara ny Tale vaovao fa tafiditra ao anatin’ny lahasany ny fanatsarana ny tontolon’ny filazam-baovao anaty aterineto na ilay antsoina amin’ny teny teknika hoe e-communication. Tafiditra ao anatin’izany ireo tambajotra sosialy toy ny facebook. Tambajotra sosialy mandray anjara amin’ny fampahafantarana ny Faritra Analanjirofo. Mpanao facebook tsy ho mpanao “j’aime sy j’adore” fotsiny fa mba ho olom-pirenena afaka mandray anjara mivantana amin’ny asa fampandrosoana amin’ny alalan’ny teknolojia eo am-pelatanana.
Momba ny tontolon’ny serasera io hatrany, dia ezahina ny hanome boky momba ny asa fanaovan-gazety an’ireo lisea mba ho tari-dalana ho an’ireo mpianatra maniry hanohy fianarana eny amin’ny ambaratonga ambony.
Eo amin’ny lafiny kolontsaina, dia anisany ao anaty fandaharan’asa ny fitrandrahana ireo kolontsaina izay mbola misitrisitrika any ho any. Eo koa ny fanetsehana ireo hetsika ara-kolontsaina. Ho fanampiana ireo mpanakanto ao Analanjirofo mba hisandratra, ankoatra ny fanomezan-danja ny fandefasana ny vokatr’izy ireo amin’ny fahitalavitra sy onjam-peo mahazatra, dia hisy ihany koa ny fampahafantarana izany amin’ny alalan’ireo teknolojia maro lafy.
Nanamafy ity talem-paritry ny serasera sy kolontsaina vaovao ao amin’ny Faritra Analanjirofo ity fa serasera matanjaka sy kolontsaina matanjaka no fanamby. Izy izay tsy vahiny amin’io sehatra io. Efa 11 taona naha mpanao gazety. Mpanao gazety tao amin’ny vondron-tserasera Sodiat no nahalalan’ny maro azy. Izy ihany koa no mpanorina ilay vondrona facebook malaza Ino Maresaka à Tamatave ( IMT) izay efa lasa fikambanana mandray anjara mavitrika amin’ny asa fampandrosoana ao Toamasina tao anatin’ny 5 taona nisiany.
Tonga niatrika ny famindram-pahefana ireo solontenam-panjakana ao Analanjirofo notarihin’ny Sekretera jeneralin’ny prefektoran’i Fenoarivo-Atsinanana sy ireo talem-paritra avy amina sampan-draharaham-panjakana isan-tokony.
Taorian’ny famindram-pahefana, dia nisy avy hatrany ny fivoriana notarihiny momba ny fanomanana ny Tagnamaro h atao ny sabotsy 15 jona.